स्वदेशी पढाइको स्तरमा प्रश्नचिह्न ! चिकित्सक लाइसेन्स परीक्षामा ४१ % फेल – Peacepokhara.com
स्वदेशी पढाइको स्तरमा प्रश्नचिह्न ! चिकित्सक लाइसेन्स परीक्षामा ४१ % फेल
काठमाडौँ २० पुस । नेपालकै मेडिकल कलेजबाट चिकित्साशास्त्रमा स्नातक (एमबीबीएस) गरेका ४१ प्रतिशत डाक्टर अति सामान्य मानिने लाइसेन्स परीक्षामा फेल भएपछि मुलुकमा हुने पढाइको स्तरमा प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । यति ठूलो संख्यामा चिकित्सकहरू फेल हुनुका पछाडि पढाइको स्तरमात्र नभई एमबीबीएस परीक्षामा हुने अनियमिततालाई पनि कारण मानिएको छ । एमबीबीएस परीक्षामा व्यापक अनियमितता हुने गरेको दाबी गरिएको छ ।
काउन्सिलका केही पदाधिकारी नै लाइसेन्स परीक्षाको प्रश्नपत्र एकदम सामान्य र सजिलो हुने बताउँछन् । ‘एमबीबीएसमा साढे पाँच वर्षसम्म पढाइ गरेकाले लाइसेन्स परीक्षामा सहजै ९० प्रतिशतसम्म अंक ल्याउन सक्छन्,’ एक पदाधिकारीले भने, ‘यस्तोमा पनि फेल हुनेले एमबीबीएस कसरी पास गरे होलान् ? ’ नेपालका मेडिकल कलेजमध्ये त्रिवि शिक्षण अस्पताल, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट एमबीबीएस गरेर लाइसेन्स परीक्षामा फेल हुनेको संख्या भने १० प्रतिशतभन्दा तल रहेको काउन्सिलका एक पदाधिकारीले बताए । गत महिना भएको पछिल्लो लाइसेन्स परीक्षामा देशभित्रकै मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस गरेका ६ सय ८३ जनाले परीक्षा दिएका थिए । यीमध्ये ४ सय ३ जना मात्र पास भए । ४१ प्रतिशत अर्थात् २ सय ८० जना फेल भएका थिए । कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।
काउन्सिल सम्बद्ध स्रोतका अनुसार केही वर्ष अघिसम्म नेपालभित्रका कलेजमा पढेका विद्यार्थीको नतिजा यस्तो खराब हुँदैनथ्यो । केही खास मुलुकबाट एमबीबीएस गरेर आउने विद्यार्थी लाइसेन्स परीक्षामा बढी फेल हुने गर्थे ।
विहेको एनिभर्सरीमा करोडको भोज
peacepokhara 08 Mar 2015
peacepokhara 05 Jan 2017
ढुकुटी कारोबार गर्नेलाई नौ वर्षसम्म कैद हुने
peacepokhara 22 Apr 2015